Ahoana ny fomba hamadihana sy hamonoana ny hafainganam-pandehan'ny fitaovana ao amin'ny Chrome | la-manette.com
6 février 2021 5 février 2021 feh Claude henrichon
Inona no atao hoe Chrome Hardware Acceleration ary mandeha ve izany?
- Ao amin'ny Chrome, mandehana any amin'ny menio Chrome > Fikirana > mandroso. Eo ambanin'ny System, ampio ny safidy Ampiasao ny fanafainganana fitaovana rehefa misy.
- Mba hanerena ny acceleration, midira Chrome: // flags ao amin'ny bara fitadiavana. Eo ambanin'ny lisitry ny fanoloana rindrambaiko, apetraho amin'ny mampandeha, ary avy eo dia fidio Avereno.
- Azonao atao ny manamarina raha mandeha ny fanafainganana ny fitaovana Chrome amin'ny fidirana chrome: // gpu ao amin'ny bara adiresy eo an-tampon'ny navigateur.
Hazavain'ity lahatsoratra ity ny fomba avelao sy esory ny fanafainganana ny fitaovana ao amin'ny Chrome, ny fomba hijerena raha toa ka afaka izany, ny fomba hanery ny fanafainganana raha ilaina, ary ny fomba hamaritana raha manampy anao na tsia ny fanafaingana fitaovana.
Mamela ny fanafainganana ny fitaovana ao amin'ny Chrome
Azonao atao ny manafaingana ny fitaovana amin'ny fikandrana Chrome:
1. Ampidiro chrome: // fikirana ao amin'ny bara adiresy eo an-tampon'ny Chrome. Na, ampiasao ny bokotra menu eo an-tampon'ny havanana amin'ny navigateur hisafidianana Fikirana.
2. Mankanesa any amin'ny faran'ny pejy ary safidio ny rohy Advanced.
3. Mankanesa any amin'ny farany ambany amin'ny pejin'ny fanovana mba hahitana safidy fanampiny.
4. Eo ambanin'ny lohateny rafitra, tadiavo ary ampio ny safidy Ampiasao ny fanafainganana fitaovana rehefa misy.
5. Raha asaina mamerina ny Chrome ianao, esory ny tabilao misokatra rehetra, ary sokafy indray ny Chrome.
Rehefa manomboka ny Chrome, sokafy ny chrome: // gpu indray ary hamarino fa miseho eo akaikin'ny ankamaroan'ny singa ao amin'ny "Status Feature Graphics" ny teny hoe "Haingana fitaovana".
Raha hitanao fa efa mandeha ny safidy "Ampiasao ny fanamafisam-peo rehefa misy" fa ny firafitry ny GPU dia manondro fa tsy misy ny fanafainganana dia araho ny dingana manaraka.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hahazoana hafainganam-pandeha amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny hack DNS
Ahoana ny fomba hanerena ny hafainganam-pandehan'ny hardware amin'ny Chrome
Ny zavatra farany azonao atao mba hampandehanana ny fanafainganana rehefa toa tsy tian'i Chrome dia ny manolo ny iray amin'ireo sainam-pirenena maro:
Ampidiro ny chrome: // saina ao amin'ny bara adiresy.
Tadiavo ny fizarana amin'ity pejy ity mitondra ny lohateny hoe Bypass Software Render List.
Hanova ny safidy Disable ho Enabled.
Safidio ny bokotra manga Relaunch Now rehefa miseho eo amin'ny farany ambany amin'ny Chrome izy io rehefa avy namela ny fanafainganana ny fitaovana.
Hiverina any amin'ny page chrome: // gpu ary jereo raha mandeha ny acceleration.
Amin'izao fotoana izao, tokony hiseho eo akaikin'ny ankamaroan'ny entana ny fanafainganana fitaovana.
Raha toa ka mbola miseho ho kilemaina izy ireo, dia mety manondro olana amin'ny karatrao na ny mpamily azy izany. Havaozy ny mpamily ny solosainao hamahana ireo olana ireo.
Ahoana ny fomba hamonoana ny hafainganam-pandehan'ny hardware ao amin'ny Chrome?
Mba hamonoana ny fanafainganana ny fitaovana ao amin'ny Chrome, avereno fotsiny ireo dingana etsy ambony mba hampandehanana azy, fa esory ny safidy fa aza velomina.
Efa mandeha amin'ny Chrome ve ny fanafainganana fitaovana?
Ny fomba tsara indrindra hijerena raha alefa ao amin'ny Chrome ny fanafainganana ny fitaovana dia ny mitendry chrome: // gpu ao amin'ny bara adiresy eo an-tampon'ny navigateur.
Hahazo valiny marobe ianao, fa ny ampahany mahaliana anao dia ny fizarana antsoina hoe "State Feature Graphics".
Ny zavatra manan-danja tokony hotadiavina dia eo ankavanan'ny tsirairay amin'ireo zavatra ireo. Raha alefa ny fanafainganana fitaovana dia tokony hiseho ny Hardware Accelerated.
Mety hamaky ny sasany hoe “Software ihany. Ny fanafainganana ny fitaovana dia kilemaina, saingy tsy maninona izany.
Vakio ihany koa: Tsy mandeha ny BeatsX? Ity ny fomba fanamboarana azy
Ny ankamaroan'ireo fampidirana ireo, toy ny Canvas, Flash, Compositing, Multiple Raster Threads, Video Decode, ary WebGL, dia tsy maintsy alefa.
Raha toa ka kilemaina avokoa na ny ankamaroan'ny soatoavinao dia tokony hamaky ireto manaraka ireto ianao mba hianarana ny fomba ahafahana manafaingana ny fitaovana.
Ahoana no ahafantaranao raha ilaina ny fanafainganana fitaovana?
Jereo raha mandeha tsara ny fanafainganana ny fitaovana rehefa mandeha na maty. Ny tranokala dia nomen'i Mozilla, izay niandohan'ny tranonkala Firefox, saingy ny fitsapana dia miasa tsara amin'ny Chrome. Ny pejy dia manome rohy maromaro mampiseho ny fahombiazan'ny navigateur anao.
Ohatra, demo tena tsotra no omen'ity blob animated ity, saingy misy ohatra hafa ahitana ireto horonan-tsary azo taritina sy ity 3D Rubik's Cube ity.
Raha manana karatra grafika mendrika ianao dia andramo ny mitady tranonkala misy sary mihetsika avo lenta sy lalao Flash hahitana raha misy miakanakana.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba fakana pikantsary amin'ny Samsung Galaxy A21s
Ahoana no ahafantaranao raha nisy nanakana ny laharanao?